साबुनको प्रयोगले घरमै यसरि गर्भ परीक्षण गर्न सकिन्छ ! - नेपाली खोज
घरमा साबुनको साथ गर्भावस्था परीक्षण महिला बीच निकै प्रचलित हुँदै आएको छ । किनभने साबुनको साथ गर्भ परीक्षण गर्नु सजिलो घरेलु बिधि हो । यसकारण यसका लागि कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको छैन।
हामी साबुन मार्फत कसरी घरमै गर्भ परीक्षण गर्ने?
महिलालाई साबुनको साथ गर्भ परीक्षणको सही नतीजा प्राप्त गर्न बिहानको मूत्रसँग गर्भ परीक्षण गर्न सकिन्छ । पहिलो बिहानको पिशाबमा HCG हार्मोन र uric एसिड सब भन्दा बढी हुन्छ।
यसका लागि, गर्भवती महिलाले भाँडोमा पिशाब र साबुन पानी मिलाउँनुहोस् । यसले यसमा रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दछ । जसको कारण फोम र बबलहरू साबुन पानीमा आउँदछन्, जसको मतलब यो थाहा हुन्छ कि परीक्षण सकारात्मक छ र महिलाहरू गर्भवती छन्। तर जब त्यहाँ कुनै कार्य हुँदैन, परिणाम नकारात्मक मानिन्छ।
जिल्लाको पूर्वीक्षेत्रमा पर्ने बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले विद्यार्थीका लागि आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । गाउँपालीकाका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञको सहयोगमा गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयमा गाउँपालिकामा गोष्ठी आयोजना गरी छलफल गरिएको छ । नयाँ लागु हुने पाठ्यक्रममा आफ्नो स्थानीय भाषा, शैली, भेसभुषा र परम्परा समेटिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सीलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी आफ्नै पाठ्यक्रम लागु गर्ने तयारीमा छौँ, सबै विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ, आगामी वर्ष देखि लागु गर्छौँ ।”
उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा यो पाठ्यक्रम आधारभूत विद्यालयमा लागु हुनेछ । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा मनाइने चाडपर्व, संस्कार संस्कृति, सीप कलाकौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक ज्ञान, स्वास्थ्य र सरसफार्ई, रहनशहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपीजस्ता विषयबारे परिचित गराउने उद्देश्यले यस्तो पाठ्यक्रम तयार पार्न लागिएको शिक्षा विज्ञ भीम पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।